မယ့်ကိုး: လူဖြစ်လိုသူရဲ့ ဇာတ်အဆုံး
ဘယ်လို စကားလုံးတွေပါလိမ့်။ မျက်ကွယ်ပြုနေလည်း အာရုံကို ဝင်တိုက်နေကြတာ။
မွေးလာတည်းက တစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့ မဲပြာစကားလုံးကိုပဲ ထပ်သုံးရဦးမှာလား။
ဒါပေမယ့် လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် အနားမှာ ဝက်ဝံရုပ်တစ်ရုပ်ပဲရှိတယ်။
“ ဘာဖြစ်လဲ။ ငါပျော်နေတယ် မဟုတ်လား ” လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခပ်တည်တည်လိမ်ဖို့ ကြိုးစားချင်လည်း...
လွတ်လပ်ခြင်းနှမ်းဖြူးကာ စိတ်ကြီးဝင် ဂုဏ်မောက်ဖို့ မပီမပြင်ဟန်ဆောင်ချင်လည်း …
နင့်နင့်နဲနဲကြေကွဲခြင်းကို မျက်ကွယ်ပြုကာ ဘယ်တော့မှမငိုဘူးလို့ ကျူးရင့်ချင်လည်း...
ဘယ်အချိန်တုန်းက ပြုံးခဲ့ပါလိမ့်။ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ညတင် မှောင်တာ မဟုတ်ဘူး။ နေ့တွေကလည်း မည်းနက်နေတယ်။
လူတကာတွေ အတင်းဆိုကြတာ မျက်နှာကြော တင်းမာပြီး မာနထောင်လွှားပါတယ်တဲ့။ အတွင်းစိတ် သိမ်ငယ်လွန်းလို့ အပေါ်ယံခက်ထန်တတ်တာကို သူတို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာလား။
အားလုံးရိပ်မိနိုင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ မာနဟာ အခွံသာ။ ဆင်ခြင်မှုဆိုတာ ဗလာ။ အသေအချာပေါ့ ထိန်းချူပ်နိုင်စွမ်းဟာ လွတ်ထွက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကို သရော်စော်ကား ထပ်မကြည့်နဲ့တော့။
နားလည်ချင်သူမဲ့ ကျွန်မရဲ့ စကားလုံးဟာ အချည်းနှီးသာလေ။ လစ်ဟာနေတဲ့ စာနာမှုတွေကတော့ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ရယ်သွေးသွမ်းကုန်ကြ။ ရာသီခွင်တွေဟာ အနှစ်မဲ့လွန်းစွာ ကခုန်နေကြ ။နောက်ကျောက ဓားတွေဟာ ပုခုံးချင်းယှဉ် ထိုးနှက်လာကြ။
ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ လမ်းတွေဟာ ဖုန်မှုန်တွေအဖြစ်ပြောင်းကာ လွင့်စင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ လှေကားထစ်တွေက တွန်းချကာ တံတားတွေက လွှတ်ချခဲ့ပြီ။ နတ်ဆိုးက အသေသတ်ခဲ့ပြီ။
အသေအချာလေ။ ပိုင်ဆိုင်သမျှ အကျိုးအပဲ့တွေကို သင်္ဂြုံလ်ဖို့ ၊ ကောင်းကင်ကို အရည်ဖျော်ပစ်ဖို့၊ အလင်းလှိုင်းကို မီးရှို့ပစ်ဖို့ ခွန်အားစုဆောင်းရတော့မှာ။ အိပ်မက်တွေကို ဘေးဘက်ကို လွှင့်ပစ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ ။ ဒီဘဝကို သွန်ချဖို့ မနှောမျောသင့်တော့။
Denis Bowen: Moon Rising, 1989
ဝေဒနာတွေကို လက်သင့်ခံနေတာ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်နေပြီ။ တစ်ယောက်တည်းသာ။ အထီးကျန်သော…ဆိုတဲ့ နာမဝိသေသနတွေကို ဆိတ်ငြိမ်စွာ ရှုမှတ်လို့ လွတ်လမ်းရှာသင့်ပြီပဲ။
တစ်ခန်းမရပ်သေးပေမယ့် အရန်လူအဖြစ်တောင် အသုံးမဝင်သူကို အမြန်ဆုံး ရှင်းထုတ်ချိန်ရောက်ပြီလေ။ … ။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 12/19/2009 09:00:00 PM
Welcome Come Back ပါ.မယ်ကိုး။ ( ၂ ) နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်
19/12/09 9:29 PM
ဒီစာရေးသူရဲ့လက်ရာ ကိုဖတ်ရခြင်း အရသာတစ်မျိုးကို
19/12/09 9:34 PM
အင်မတန် စာရေးကောင်းသော ချစ်ညလေး....
နှစ်ပေါင်းရာချီတိုင်အောင် ချစ်သောခင်သော မောင်နှမများစွာနှင့်....
ထာဝရဆီသို့...... ...... ...... ......
19/12/09 9:38 PM
မုန်းသူတွေ ရှိမထင် ပါဖူး မမယ်ကိုးရာ
ဆက်ရေးပါ ဆက်ရေးပါ နှစ်နှစ်မှသည် နှစ်များစွာ..။
အထီးကျန်ခြင်း တိတ်ဆိတ်ခြင်း အလိုမကျခြင်းတွေကို ပြောပြနေတာ ခြောက်ခြားဖွယ်...။
19/12/09 10:00 PM
မမရေ နှစ်နှစ်ကနေ နှစ်နှစ်ဆယ် နှစ်နှစ်ရာ(ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပြောပါတယ် :D)ထိ ဘလော့ဂ်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရေးနိုင်သူဖြစ်ပါစေနော်
19/12/09 10:11 PM
တိုးတိုးလေး..ကြိတ် ပြည့် လိုက်တာပေါ့....
ရေးသမျှ ဖတ်ကောင်းနေတာပဲ ညီမလေး..
19/12/09 10:20 PM
ဘယ်အချိန်ကျမှ စာစရေး ရေး
ရေးသမျှစာတွေက ဖတ်လို့ကောင်းနေသလို လေးနက်မှုရှိပါတယ်...
ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ အလုပ်ကို အတားအဆီး အပိတ်အပင်မရှိ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်နိုင်ပါစေလို့ မမီးဆုတောင်းပေးမယ်နော်....
“အတွင်းစိတ်က သိမ်ငယ်လွန်းလို့အပေါ်ယံခက်ထန်တတ်တာကို သူတို့ မသိချင် ယောင် ဆောင်နေကြတာလား ........ ”လူသား တစ်ယောက် ရဲ့သဘာဝ ကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ စာသားလေးပဲ အစ်မရေ .... ထုံးစံအတိုင်း အစ်မယ်ရဲ့စာလေးတွေကတော့ သဘောကျမြဲ နှစ်ခြိုက်မြဲပါ ......
ခင်မင်လေးစားရသော အစ်မမယ်ရဲ့“မယ်ကိုးရဲ့စာစုများ” ဘလော့လေး နှစ်နှစ် ခရီးမှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အော်မြင်မှုများစွာ ပျော်ရွှင်မှု များစွာဖြင့် ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေ ..... စာဆက်ရေးချင်တဲ့ အစ်မမယ်ရေ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း ဖတ်ဖို့ အတွက် စောင့်မျှော်လျက်ပါ .... :)
20/12/09 1:16 AM
20/12/09 1:27 AM
မမ ရေ သာမီး ၁ မရဘူးနော် ဟင့်ရွှတ် နိုချင်တယ် ဗြဲဟဲဟဲ
20/12/09 1:36 AM
မမ ရေ ၂ နှစ်ပြည့်မှသည် နောက် နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ တိုင်အောင် ဘလော့ဂ် ဂင်းနိုင်စေသော်ဝ်
ဟိဟိ မွေးနေ့ ဆုတောင်းနဲ့ တူသွားပြီ တတ်နိုင်ဘူးနော် ဟဲဟဲ
ချစ်မ custom message မှာပြောတော့ စာပြန်ရေးမယ်ဆို ၂ နှစ်ပြည့်တင်ပြီးရင် စာပြန်ရေးနော် သိလား မျှော်နေမယ်နော် သိလား
20/12/09 1:37 AM
ပြန်ဒေါ့မယ် ဒုန်းးးးးးးဒုန်းးးးးးးးးဒုန်းးးးးးးးးးးး နှောင့်ယှက်သွားတယ် လို့မထင်စေချင်ပါ ဟီးးးးးးး ဂယ်လဲ နှောင့်ယှက်သွားတာပဲ ဟားဟားးးးးးးးးးးးးးးးးး ဘိုင်
20/12/09 1:38 AM
အရန်လူလဲ လက်ခုပ်တီးပေးဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။
20/12/09 5:47 AM
20/12/09 5:54 AM
ဆီ ပျော်ရွှင်စွာရောက်၇ှိစေသတည်းး)
20/12/09 9:54 AM
ရွာသားလေး ပြောသလို မုန်းသူတွေ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး...
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ပြောရဦးမယ်...
မယ်ကိုး ဘလော့ကို အမြဲ ဖတ်ပါတယ်...
Google Reader ထဲကနေ ဖတ်ပါတယ်...
ဘလော့ကိုတော့ အမြဲ မလာဖြစ်ဘူး... အချိန် ရှားပါးလို့ပါ...
ခုတော့ ဘလော့ကိုလာပြီး ဆုတောင်းတာပါ...
၂ နှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်တရာတိုင် စာတွေ ကဗျာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ...
တဆက်ထဲ Merry X'Mas & Very Happy New Year!!! လို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်...
20/12/09 11:08 AM
ခံစားချက်တွေကို ချရေးတဲ့ အခါ စိတ်သက်သာရာ ရတာပေါ့နော်..
နောင် နှစ်များစွာတိုင် စာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်.. :)
20/12/09 12:40 PM
20/12/09 2:33 PM
လာဖတ်သွားတယ် အမ .......
စာရေးကောင်းတာနဲ့ စကားလုံအသုံးအနှုံးလှတာတော့ အမှန်ပဲ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှေ့သို့ ပါ အမ ...
20/12/09 5:46 PM
စကားလုံးတွေ ရွေးတာ ကောင်းတယ်ဗျာ။
20/12/09 9:46 PM
21/12/09 3:26 AM
ဘလော့လေးလည်း ထာဝရ တည်တံ့ပါစေဗျာ . . . :)
21/12/09 5:03 AM
21/12/09 5:04 AM
21/12/09 7:29 AM
ရုံးပိတ်ရက်မှာ ကလော့ကလိတာနည်းနည်းများသွားလို့ လင့်တွေအားလုံး ပျောက်ကုန်တယ် ...
အခုမှ Google ထဲကနေ နံမည်တွေရိုက်ထည့်ပြီး ပြန်ရှာနေရတာ မမရေ... အသစ်တင်တာ မသိလိုက်ရဘူး အပြစ်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ အဟင့် ... ရွှတ် ..း(
အလွမ်းပြေသွားတယ် ... ခုလိုလေးပြန်ဖတ်လိုက်ရတာ ...
မမ အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ခုလို စာလေးတွေ များများရေးနိုင်ပါစေနော် ... ထာဝရအားပေးလျှက်
မင်္ဂလာပါ မယ်ကိုး ရေ..
၂ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရလေးပေါ့။ အားပေးနေမယ်။ ဆက်လက် ရေးပါအုံးလို့။
ထုံးစံအတိုင်း စာကို လာခံစားသွားတယ်
မယ်ကိုးလေး.. စာဆက်ရေးပါ၊ ဆက်ဖတ်မယ်၊
21/12/09 9:04 PM
အလွမ်းပြေ ..မြန်မာပြည်ကပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း စာလေးဖတ်လိုက်ရလို့ ပျော်သွားတယ်
“ငါ့ကို သရော်စော်ကား ထပ်မကြည့်ကြနဲ့တော့
ခုတလောဖြစ်ရပ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်နေလို့ အရမ်းထိသွားတဲ့ စာစု.. မမယ်ကိုးရေ... ဆက်သွားပါ..
22/12/09 11:44 AM
င့ါ နှမ နှယ် ဘာတွေ တွေးနေတုန်း
ဟာဟ နှစ်နှစ်ခရီးတောင် ရောက်ခဲ့ပြီလား
အစ်ကိုလည်း အလုပ်သစ်မှာ အသားကျအောင် လုပ်နေရတယ် ညီမရေ တခါတလေဆို ညဖက် ရထားတောင် မရှိတော့ဘူး မရောက်ဖြစ်တာ ခွင့်လွတ်
ယုယကပြောတယ် ညီမ အသစ်ဘလော့လုပ်ထားတယ်တဲ့ ရောက်ကို မရောက်ဖြစ်တာ ကိုယ့်အိမ်တောင် စိတ်အရမ်းအားမှ
22/12/09 12:37 PM
23/12/09 11:24 AM
Π__＿ 。 ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚
Merry Christmas andaHappy 2010 New Year
((ချစ်တဲ့ ညလေး.. ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေ..))
24/12/09 7:25 PM
မမမယ်ကိုးရေ...မစာတွေ့ လို့ အချိန်ရတုန်းလေး လာဖတ်လိုက်ပါတယ်...သိမ်ငယ်စိတ်က လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ်...ဘ၀ကို သွန်ချရင်း စုဆောင်းထားတဲ့ အားတွေနဲ့ အသစ်တွေကို မွေးဖွားနိုင်ပါစေလို့ ...
25/12/09 9:31 PM
25/12/10 2:21 AM
ဟိဟိ ကိုယ့်မန့်တာကိုယ်ပြန်ဖတ်ရင်း မယ်ကိုးကိုအားနာရဲ့ ဟီး ကိုယ့်ထက်အသက်များကြီးမလားလို့ အစ်မခေါ်မိတယ် ချောတီးနော်း)
20/12/11 2:58 PM